VaObey Sithole veMDC Alliance Vosungwa Uku Mapurisa Achitatarika Kuroverera Amai Mubayiwa
Obey Sithole MDC Youth Leader
Mutungamiriri wevechidiki muMDC Alliance, VaObey Sithole, vakasungwa nemusi weMuvhuro kumatare edzimhosva eRotten Row muHarrae vachipomerwa mhosva yekuita musarinya kana kuti criminal nuisance pachirungu.
VaSithole vanga vaenda kudare uko vange vachifanira kutongwa nevamwe vavo vanoti mumiriri weHarare West mupararemende Muzvare Joana Mamombe, nhengo dzebazi rechidiki muMDC Alliance, Muzvare Cecilia Chimbiri, Muzvare, Muzvare Netsa Marowa, VaLovejoy Chitengu naVaStanely Manyenga.
VaSithole nevamwe vavo, vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo uno dziviriri kupararira kweCovid-19 vachinzi vakaratidzira kuWarren Park. Asi nyaya yaya yavo haina kuzoenderera mberi sezvo muchuchuchusi ange asina kugadzirira. Nyaya iyi yave kuzonzikwa musi wa13 Chivabvu.
Gweta raVaSithole, VaObey Shava, vati vari kupomerwa mhosva yekuratidzira zvisina mvumo kumahofisi eNew Government Complex kutanga kwemwedzi uno.
Kutaura kudai VaSithole vari mumaoko emapurisa uye vano tarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. VaShava vanoti vanoda kuti nyaya iyi inotongwe nekukasika.
Mune imwewo nyaya iri kumatare, nyaya iri kupomerwa Muzvare Marova yekuti vakarova mumwe mupurisa kuHarare Central Police Station hainawo kuezoenderera mberi neMuvhuro sezvo vachuchusi vange vasina kugadzirira zvekare.
Muzvare Marova vari kurambawo nyaya yavari kupomerwa iyi vachiti ndivo vakatorohwa nemupurisa mushure mekubvunza mapurisa kuti sei vaishungurudza vamwe vavo Muzvare Mamombe naMuzvare Chimbiri vainge vosungwa vachinzi vakataura nevatori venhau panze pedare ramejastiriti muHarare vachitsigira mimwe nhengo yeMDC Alliance VaMakomborero Haurizivishe. Nyaya iyi yave kuzonzikwa musi 10 Chivabvu.
Kumatare kwekare nyaya yemudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika wavari kunetsana naye, VaContstaine Chiwenga, Amai Marry Mubaiwa, yatadzwo kunzikwa neMucvhuro sezvo vachuchusi vati vanoda imwe mwedzi miviri kuti itongwe nedare sezvo ichiri kuferefetwa.
Amai Mubaiwa vari kupomerwa mhosva yekuda kuuraya murume wavo apo airwara kuSouth Africa muna 2019.
Gweta raAmai Mubaiwa, Amai Beatrice Mtetwa, varatidza kusafara nezviri kuitwa nevachuchusi vachiti zvave pachena kuti Amai Mubayiwa vakasungwa pasina humbowo.
Vabva vatura mapepa kudare kuti nyaya iyi iraswe sezvo vachuchusi vehurumende vasina humbowo. Muchuchusi Amai Netsai Mushayabasa vati vanoda nguva sezvo dzimwe mhosva dzavanoti dzakaparwa dzakaitikira kuSouth Africa.
Asi Amai Mtetwa vati zvaizikanwa kuti kuferefetwa kwenyaya iyi kwaizoitwa kuSouth uye nyaya yevachuchusi yekuda kuvanda neCovid-19 haina maturo vachiti Lockdown yakaitwa munaKurume gore rapfuura mushure memwedzi miviri nyaya yaAmai Mubaiwa yatanga uye vachuchusi vavimbisi kuti kuferefetwa kwenyaya iyi kunenge kwapera.
Amai Mtetwa vati Amai Mubaiwa vakanetseka kuwana mukana wekubhadhara mari yechibatisro nekuti dare raifunga kuti vachuchusi vaiti vane humbowo asi ivo vasina.
Vatiwo Amai Mubaiwa vari kurwarara uye vano fanira kudanwa kudare kana vachuchusi vachinge vagadzirira.
Amai Mtetwa vati Amai Mubaiwa vakatobuda muchipatara nemusi weSvondo kuti vauuye kudare nhasi uye nyaya yehutano hwavo inozikanwa nemhunhu wese zvekuti muna Zvita vakatombouuya kudare vari muAmbulance.
Amai Mubaiwa vari kupomerwa mhosva yekuburitsa mari yekunze munyika zvisiri pamutemo.